Kooxda Barcelona oo hal dhibic kala soo laabatay Garoonka Nuevo Mirandilla oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 23 Sebt 2021. Kooxda Barcelona ayaa hal dhibic kala soo laabatay Garoonka Nuevo Mirandilla oo ay booqatay, kaddib markii ay labada kooxood Cadiz iyo Barca ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Cadiz iyo Barcelona ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 65-aad kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa noqotay 10 xiddig oo kaliya maadaama uu F. d. Jong qaatay kaarka roosaha, kaddib markii uu taako u kacay mid ka mid ah xiddigaha naadiga Cadiz.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac 0-0 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Cadiz iyo Barcelona oo ciyaar aad u xiiso badan ay ku dhax martay garoonka Estadio Nuevo Mirandilla Venue, Blaugrana ayaa haatan kaga jirta booska 7-aad miiska kala sarreynta horyaalka La Liga ee dalka Spain.